Nolosha Nus-ka-mid ah Kala-Bixinta Baraha Bulshada | Martech Zone
Nolosha Badhkii Bulshadda Bulshadda
Markii aan ka hadlay San Diego on Trolls-ka Warbaahinta Bulshada, Dhibaatooyinka iyo Dhibaatooyinka, qodobka ugu muhiimsan ee khudbadda oo dhan wuxuu ahaa cabsida aan loo baahnayn ee lagu sii waday baraha bulshada markasta oo ay shirkaddu siibato.
Nolosha nuska ah ee dhalaalida warbaahinta bulshada waxay si toos ah ula xiriirtaa sida ugu dhakhsaha badan ee shirkadda xigta ay u siibato.
Taasina waxay dhacaysaa daqiiqado kasta hadda. Dhamaan guuxa todobaadkan waa boostada ku taal Shirkadda Cuntada ee Amy gudaha Scottsdale, Az. Hadda… ka hor intaadan tegin oo wax akhrin in boostada, kaliya akhri this dheji kahor intaadan dhaqaaqin.
Waxaan ahaa nasiib ku filan (ama nasiib ku filan) inaan ka shaqeeyo dhinaca farsamada ee warshadaha makhaayadda dhawr sano ka hor. Margins way adkeyd, wareejinta shaqaaluhu waxay ahayd wax lagu qoslo, macaamiisha way qallafsanaayeen, saacadaha iyo cadaadisyada dadka maqaayadaha ku sugnaana waxay ahaayeen kuwo canaan ka baxsan. Marnaba ma furi doono shirkad ii gaar ah oo cuntada la xiriirta… weligay. Waxaan saaxiibo ku leeyahay warshadaha maanta waana runtii ganacsi ay tahay inaad jeceshahay maxaa yeelay faa iidooyin kale oo badan majiraan.
Marka, qiyaasi inaad ugu dambayntii bilawday riyadaada oo aad dhistay bistro-kaaga. Ka fikir hada inaad halgan ugu jirto sidii maqaayadaada ay uheli laheyd oo fursad ay kuugu imaan laheyd si aad uhesho dareenka shacabka adigoo u maraya bandhig telefishan dhab ah
Maxuu khaladku khaldami karaa?
Waa hagaag… maadaama barnaamijyada dhabta ah ee telefishanka ay yihiin shirkad malaayiin doolar ku shaqaysa iyada lafteeda, wax yar ayaa jira. Shaqada Gordon Ramsey maahan inay qaadato makhaayad oo ay si fiican u hagaajiso barnaamijkiisa. Daawadeyaashu way u mahadnaqeen xaqiiqda ah inuu labis xun yahay oo isla weynaaday… taasi waa madadaalo. Ujeeddada bandhiguna waa in la hubiyo in makhaayadda lagu sawiray iftiinka ugu xun ee suuragalka ah si Mr. Ramsey uu iskaga baxo isagoo u muuqda horyaal.
Waxaa loo yaqaan Qurxinta Quraacda, dadweynow. Waad ku dhiirran kartaa inaan idhaahdo waxay jecel yihiin soo-bandhigidda ... waxaa jira fiidiyowga dhacdada ee boggooda.
Taasi maahan dhaleeceyn buuxda ee Mr. Ramsey. Waxaan daawadaa bandhigga, markuu musmaarrana, wuu musbaaraa. Laakiin wali waa madadaalo / cunto kariye / ganacsade. Milkiilayaashu waxay ahayd inay ogaadaan waxa ay galayaan. Xaaladdan oo kale, riwaayaddu ma aysan lahayn dhammaad farxad leh, Ramsey wuu ka fogaaday makhaayadda, adduunkuna wuxuu uga jawaabay baraha bulshada iyagoo ku weeraray milkiilayaasha Samy iyo Amy Bouzaglo Facebook.
UPDATE: Riwaayad weyn oo ku saabsan sida dhabta ah ee telefishanka u shaqeeyo, daawo muuqaalkan cajiibka ah ee Charlie Brooker:
Amy Boozaglo ayaa ka jawaabtay (haddaba akhri Buzzfeed). Ma qurux badnayn. Xaqiiqdii, waa wax fool xun.
Taasi waxay tiri, maahan wax aan loo baahnayn. Amy's Bakery Company maahan silsilad qaran, waa bistro ku dhibtooneysa Scottsdale, Arizona. Dadkii weeraray Amy's Bakery Company wax kuma cunin halkaas, mana cuni doonin halkaas, waligoodna maba ogaadeen inay jiraan ilaa ay ka baxayaan telefishanka.
Ha Bilaabato Cabsida-Sahlan
Marxaladda xigta ee burburka warbaahinta bulshada, dabcan, waxaa loogu talagalay dadka aqoonta u leh baraha bulshada inay dhammaantood furaan boggagooda oo ay billaabaan tubbada, taabo, siibidda sida ay uga badbaadin lahaayeen shirkaddan burburka saafiga ah iyo sida ay u liidato milkiilayaashu inay difaacayaan naftooda baraha bulshada sida ay sameeyeen. Sure… sifiican ugama aysan qaban. Laakiin ma eedeyn karo iyaga. Ka soo qaad adiga oo kabaha ku jira, noloshaada shaqadeeda waxaa lagu sawiray inay tahay riyooyin laga daawado telefishanka qaranka, waxaana lagaa tagay guutooyin trolls ah oo ku yaal Reddit, Yelp iyo Facebook oo sumcadda ka dhigaya shirkaddaada.
Aniguba waan xanaaqsanahay. Aniguna sidoo kale waan ka jawaabi lahaa.
Marka Maxaan baranay
Makhaayada ayaa heshay dareen qaran, ilaa 50k + kuwa raacsan Facebook, iyo - Ma xaqiijin karo tan - laakiin waxaan hubaa inay qolka cuntada ay hadda buuxsameen. Kuwa ay degelku waa mashquul inuu burburay. Dhamaan dadka ka qoslinaya Scottsdale si ay wax uga cunaan 'meeshaas oo ah Habeenkii Jikada', waxaan hubaa in qaar ka mid ah ay aadayaan guryahoodii oo ay dhahaan 'Wow, taasi way fiicneyd'!
Oo sidaas oo kale ayay u socotaa nolosha nuska ah ee burburka warbaahinta bulshada. Ka fog qeylada iyo qeylada dadka u dhuun daloola baraha bulshada, waxaad ogaan doontaa in qeybtani aysan aheyn wax aan ka fogeyn dabaysha. Xaqiiqdii, si xun ayey uraysay daqiiqado yar, laakiin dhaqso ayey noqon doontaa.
Ha aaminin buun buuninta baraha bulshada, dadweynow. Shirkad kasta way soo kaban kartaa. Saadaalkayguna wuxuu yahay in Shirkadda Cuntada ee Amy ay si fiican u soo laaban doonto.
Tags: shirkada dubida amywarshadaha makhaayaddamaqaayadaha
Qalabaynta Ganacsigaaga Fiidiyowyo Xirfad Leh
Ka guur CMS una gudub CMS
Fadeexadaha internetka caadi ahaan waa sida warqad birqaati ah - way kala firdhaan sida ugu dhakhsaha badan markay shitaan. Laakiin waa wax walba sida aad u maareyso. Shirkadda Cuntada ee 'Amy's Baking Company' ee iskeed isu-dhiibtay ee FASHILAN ayaa la xaqiijiyay markii ay uga jawaabayeen dhaleeceeyayaashooda is-xaq-u-yeelid xaq-u-leh, barxadda iskuulka, dirir dagaal, iyo - ugu xumaa dhammaan - weerarada shaqsiyadeed ee hooseeya.
Bouzaglos waxay heleen fursad ay ku helaan fikirka dadweynaha dhinacooda, laakiin way afuufeen. Way is yara adkaan lahaayeen oo waxay uga jawaabi lahaayeen dhaleeceeyayaashooda isku darka nimco, is-hoosaysiin iyo kaftan is-liidaya. Taa baddalkeeda, qoraalladooda raali-gelinta ah, ee qoraallada sida liidata loo sameeyay waxay damaanad qaadeen natiijo sida isku darka dareeraha hypergolic ee matoorka gantaal.
Taas bedelkeeda, fiiri sida wariyaha da'da yar uu u maareeyay toogashadiisa bishii hore xarun TV-ga Waqooyiga Dakota ah, ka dib markii uu watay live-mic F-bam markii uu hawada soo galay markii ugu horeysay (iyo markii ugu dambeysay). Intaa ka dib, isagu iskama uu dayin inuu eedeeyo qof kale naftiisa mooyee, wax xumaan ah uma uusan haynin saldhiga uu shaqada ka joojiyay, wuxuuna si khushuucsan u qiray suugaantiisa FASHILKA ah isla markaana uu isaga ku qoslay.
Natiija ahaan, dadweynuhu waxay u arkeen inuu yahay nin da 'yar, oo la jecel yahay oo sameeyay daacadnimo daacad ah. Dad badan ayaa ka xumaaday toogashadiisa marka loo eego caydiisa hawada.
Ninkaasi wuu soo kaban doonaa oo wuu fiicnaan doonaa.
Laakiin Shirkadda Cuntada ee Amy? Si aad ah uma hubo taas. Waxay u badan tahay inay ku raaxeysan doonaan kor u qaadis kooban oo xagga ganacsiga ah oo ka yimid dadka xiisaha-doonka ah. Qaar ka mid ah dadkaas xitaa waxay isku dayi karaan inay milkiilayaasha ku cugtaan iska horimaad ama laga saaro. Laakiin shaki ayaa ku jira inay arki doonaan ganacsi badan oo soo noqnoqda haddii wax soo saarkoodu yahay mid dhexdhexaad ah oo qaali ah, oo waxay ku bixiyaan adeeg si xarago leh.
Laakiin tilmaamaha ugu weyn ee ka soo horjeeda guushooda mustaqbalku waa in sunta, habdhaqanka aan fiicnayn ee ay u muujiyaan kuwa naqdiyaya iyo shaqaalaha ay u badan tahay inay ku daadiyaan la macaamilkooda alaab-qeybiyeyaasha, baananka, iyo bulshada ku hareeraysan - marka la soo koobo, qof kasta iyo qof kasta oo gacan ka geysta sidii loo ilaalin lahaa ganacsi dushiisa.
Ujeeddadaydu gabi ahaanba maaha inaan cudurdaar ka bixiyo dhaqankooda. Waxaan kaliya ka doodayaa saameynta joogtada ah ee ay ku yeelan doonto ganacsigooda. Saadaasheyda ayaa ah in ganacsiga uu noqon doono mid layaableh… in mudo ah. -
Waxaan u maleynayaa inaad labadiinuba sax tihiin, Douglas. Ganacsigu xoogaa ayuu soo kici doonaa, laakiin Facebook Likes iyo websaydhada hits micno badan kuma lahan ganacsiga muddada dheer xaaladdan oo kale Miyay tan ugu rogi karaan wax wanaagsan goor dambe wadada? Xaqiiqdii. Hadday tani dhab noqoto, ganacsigooda hadda socdaa ma horumar doonaa? Malaha maaha iyada oo aan dib u habeyn weyn.
Hadda, waxay sheeganayaan in la jabsaday; markaa haddii ay sidaas tahay, oo ay runtii yihiin martigaliyayaal aad u sharaf badan, tani si fiican ayey ugu noqon kartaa iyaga.
Ganacsi gabi ahaanba ma soo kordhayo. Waxay si ku meel gaadh ah u xidhan yihiin
Waxay ku helayeen dib u eegis naxdin leh barnaamijka 'Yelp' 2-dii sano ee la soo dhaafay iyagoo aflagaado iyo ceyrin ka saaray macaamiisha ka cawday markay heleen cunno xun ama adeeg aad u gaabis ah.
Waxay si kibir leh ula xiriireen Ramseys show si uu 'adduunka ugu sheego sida ay cuntadooda u wanaagsan tahay.' Waxaan u maleynayaa inay u maleynayeen inuu dabaysha ka saari doono iyaga.
Miyaad daawatay qaybta, ugu yaraan shanta daqiiqo ee ugu horreysa? Kuwani maahan laba milkiile maqaayad liita, waa uun nuts oo fudud oo fudud.
Waxyaabaha ayaa ah, sababta ay waxaas oo dhami u qarxiyeen markii horeba waa cuntada iyo adeegga labadaba inay ahaayeen kuwo laga cabsado. Kani ma aha dab ka kaca baraha bulshada, kani waa shirkad aan keenin wax soo saar tayo leh. Halkii uu ka shaqeyn lahaa waxa muhiimka ah ee ay ugu yeereen Ramsay si uu dhaleeceeyayaasha uga saaro dhabarkooda. Waxay labaduba ahayd isla weyni iyo wax is daba marin.
Tani si uun uma aysan bilaabin baraha bulshada. Tan waxaa bilaabay milkiilayaasha. Saadaasheyda ayaa ah in saadaashaada soo kabashada aysan shaqeyn doonin. 🙂
Sida qaar ka mid ah faallooyinka kale ay xuseen, haddii aad si dhab ah u daawan laheyd dhacdada, waad garan laheyd in Amy iyo Sammy Bouzaglo aysan aheyn dhibanayaal xaalada. Taabadalkeed, waa macaamiisha iyo shaqaalaha loola dhaqmay si liidata. U adeegidda cuntada barafaysan suuqgeyn ahaan loogu iibiyey sidii mid cusub oo qiime sare leh? Ganacsi xumo. Ku dhibaateynta macaamiisha hadal ahaan iyo jir ahaanba cabashada ama soo celinta cuntada? Ganacsi xumo. Qaadashada talooyinka shaqaalaha adigoon ogeysiin macaamiisha? Ganacsi xumo. Jawaabaha milkiilayaashu ka bixiyaan cabashooyinka iyo dib u eegista liidata iyaga ayaa iska hadlaya. Waxay sidoo kale ka xadayeen sawirro makhaayadaha kale oo ay ku dhejinayaan Facebook iyo websaydhkooda sida cunnadooda. Taasi waxay si cad u tahay xatooyada hantida aqooneed. Qaar badan oo ka mid ah meheradaha ay sawirada ka xadeen ayaa tan iyo markii ay ku daabaceen bartooda Facebook codsanaya in sawirrada laga qaado. Xitaa shirkada PR ee ay shaqaaleeyeen waxay wareysigooda ku sheegeen in ganacsigu uusan badbaadin karin ayna ka fiicnaan lahaayeen hada in la xiro oo la jaro khasaarahooda.
Ma arko wado ay uga soo noqon karaan tan. Xayeysiiska xun ee ka yimid dhacdadii KN wuxuu ahaa kaliya cirifka barafka. Tirada badan ee taageerayaasha Facebook, ka dibna tirada boos celiska ah ee loo qoondeeyay munaasabadda furitaanka berri ayaa ah dadka ugu horreeya ee rajaynaya in tareenku ku xumaado inuu sii xumaado. Xitaa waxaa jira codsi bedel ah.org oo wareegaya si waaxda shaqaalaha ay u baarto shirkadda si ay ula wareegto talooyinka shaqaalaha. Feejignaanta ayaa sidoo kale ka dhigtay iyaga sumcad ka badan xadgudubyadii hore: Amy Bouzaglo waxaa lagu xukumay xatooyo aqoonsi sannado ka hor markii ay isku dayday inay la furto khad amaah ah qof SSN ah.
Filashadaydu waa inay sii furnaan doonaan illaa lagu qasbo inay fayl gareeyaan kicitaan. Aad ayay ugu madax adag yihiin inay xidhaan sababo la xidhiidha saxaafadda xun, laakiin inta u dhaxaysa waxa ay bixinayaan shirkadda PR iyo tirada dacwadaha ay u malaynayaan inay ka gudbinayaan shabakadaha internetka, lacagta ay haystaan ​​ayaan sii socon doonin muddo dheer.
@ facebook-769091638: disqus Waxaan daawaday dhamaantiisba dhacdooyinkii u dambeeyay… waxay umuuqataa inay tahay burburka tareenka (sida ku xusan "Jikada Nightmares" mawduuca bandhiga), laakiin waxaad ku boodaysaa qashin qubka sida dadka kale oo dhami u qaateen "Xaqiiqda Dhacdada TV-ga oo ah caddeyn buuxda. Qodobka ugu muhiimsan ee jawaabtayda ayaa ah in bandhiggu yahay kaliya caddaynta wax ka beddelka weyn. Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in Ramsey uu furay bandhigga isagoo si aad ah uga hadlaya alaabta ay dubtaan (iyagu waa rootida) iyo nadaafadda jikada.
Ma aqbalayo dhaqankooda, ama jawaabtooda. Ujeeddadaydu waxay tahay ma lihin filim usbuuc qiimihiisu yahay inaan dib u eegno oo horseeday qaybihii wax laga beddelay oo la wada faleebo si loo buunbuuniyo xaaladdan. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax laga xumaado in dad badani ay ku faraxsan yihiin dhimashada dadkan. Waa wax laga xumaado, haddii aan laga sii murug badnayn, sida ay dadkani ula dhaqmaan dadka kale dhacdada. Sidii aan ku idhi boostada, haddii aan ku shubi lahaa noloshayda wax ka badan hal milyan oo doolar oo shirkaddayduna ay ku sii dhacayso kubbad dab ah, ma hubo inaan si fiican uga jawaabi doono, sidoo kale.
Tani waa maqaalkii ugu horreeyay ee aan akhriyo ee naxariis leh, ama ugu yaraan
Ujeeddo, oo ku saabsan Amy's Dubitaanka. Aniga imgurian ahaan (reddit inaadeer), yelper iyo fb raaca Amy's Baking, waxaan gabi ahaanba dhihi lahaa kuwa jecel
dhammaantood waxay ka mid ahaayeen “macaamil ganacsi” bulsho. Tusaale ahaan, waxaan "jeclahay" facebook-gaaga anigoo rajeynaya inaad hesho hadallo waalli ah oo badan oo madadaalo leh, adiguna waxaad ku dhex geli doontaa warkayga wararka. Mar alla markii la “jeclaado” waxay dhihi karaan wax alla wixii ay doonaan, dhegtana waan la wadaagi doonaa (indhaha kiiskan) illaa aan ka caajisto iyaga. Waxay qaadan karaan burburka tareenkaan oo waxay u rogi karaan dahab, laakiin ma yeeli doonaan? Aad uma badna. Dabeecad xumo, waxay ku kasbadeen in ka badan 50k facebook oo jecel maalmo yar gudahood. Markii aan ka helay iyaga, waxay ku jireen xaddiga 5-10k. Tani waxay iyaga siisay fursad ay ku noqdaan af gabay majaajillo ah (xumaan la moodo-kaliya dooro bartilmaameed iyo baroor) taas oo si fudud ugu beddeli karta mid dhiirrigelisa si loo xoojiyo iibka internetka. Ben & Jerry waxay sameeyaan jalaato si ay u sharfaan dadka, yacni Stephen Colbert's Americone Dream. Waxay sameyn karaan macmacaan jees jees ah ama alaab cusub oo doqonimo ah oo doqon ah oo ay sawirada soo dhajin karaan "Ann Coulter waa macnaheedu yahay Taco Salad." Waxyaabaha sidaas oo kale ah ayaa ilaalin kara daawashada, laakiin waxaad u baahan tahay inaad naga dhigatid madadaalo maxaa yeelay si dhakhso leh ayaan u illaawnaa. Waxaan si joogta ah u ilaawaa waxa aan daawado inta lagu jiro xayeysiinta. Burburka tareenka internetku maahan god, ee waa jaranjaro. 😉
Cusboonaysiinta: Jecel: 96,231, iyo tirinta, 10 cusub tan iyo markii aan bilaabay qorista cusboonaysiintaan.
Dhamaan waxyaabihii foosha xumaa ee laga saaray gidaarka marka laga reebo qoraalkan bishii Oktoobar: “Waxaan jecel nahay inaan ugu yeerno 'Geel Toe Mafia' oo ah farabadan Pussies oo ku gabanaya shaashadda kumbuyuutarka Ama u shaqeeya YELP ”
Waxay umuuqataa riyadeyda ah sharkade internet qosol badan oo firfircoon ayaa si lama filaan ah udhamaaday sidii uu kubilaabay Waqti aad kaga duwan tahay iyaga oo dib ugu gurguuranaya Kornayl Meow. MEOW!